Kitra any Eoropa : mitady fatratra an’i Deschamps ny Chelsea | NewsMada
Kitra any Eoropa : mitady fatratra an’i Deschamps ny Chelsea
Hatramin’izao, tsy mbola manana mpanazatra ny ekipan’ny Chelsea. Taorian’ny nandroahana an’ilay Portioge, José Mourinho, mantsy dia sahiran-tsaina ny tomponandraikitra ao anatin’ity ekipa anglisy ity, amin’izay mety hasolo azy. Hatreto, manao pimaso, amin’i Didier Deschamps, mpanazatra ny ekipa frantsay. Tsy mbola nisy aloha ny fanamarinana izany, araka ny voalazan’ny gazety any an-toerana. Nambaran’ny manampahaizana amin’ny baolina kitra any Eoropa, fa ho sarotra ny hino fa mety hamonjy an’ny Chelsea i Deschamps, izay efa nanao fifanarahana tamin’ny federasiona frantsay, ny hitondrany ny Les Bleus hatramin’ny taona 2018.
Ankoatra izay, leo ny hatao mpiandry toerana, ao amin’ny Real de Madrid, ilay Kolombianina, James Rodriguez ka mitady ekipa hafa hifindrany hilalao. Ny Manchester United, no akaiky indrindra amin’izany. Efa vonona ity ekipa anglisy ity, handoa 83 tapitrisa Euros, ho saran’ny fifindran-toerany.
Ho an’ny FC Barcelone indray, mikasa ny hanamafy ny mpanafika ny mpanazatran’ity ekipa ity ankehitriny ka mikendry ny haka an’i Fernando Torres, izay efa hamarana ny taom-pilalaovany ao amin’ny Atletico Madrid, ny faran’ny volana jona ho avy izao.